[Ukara] dr.fone - iOS Data Recovery: Naghachi-ehichapụ / Lost Data na iOS Ngwaọrụ
Ụwa 1st iPhone na iPad data mgbake software.
Naghachi photos, videos, kọntaktị, ozi, na ndetu, na-akpọ ndekọ, na ndị ọzọ.
Ò Kwekọrọ n'Ozizi na ọhụrụ iOS ngwaọrụ.
Echefuola data na-agaghị efu. Anyị nwere ike naghachi faịlụ site na ọtụtụ nkịtị ndapụta.
Echefuola data mgbe factory nrụpụta
Echefuola data n'ihi iOS update
Data na-efu mgbe jailbreak ma ọ bụ ROM na-egbu maramara
Lelee & Preview ehichapụ Data maka Free
Ị nwere ike iji nke a iOS data mgbake ka iṅomi niile ehichapụ ma ọ bụ furu efu data gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod mmetụ, na ịhụchalụ nju maka free.
Download na View iCloud ndabere Content maka Free
Ịchọrọ ibudata na wepụ iCloud nkwado ndabere na mpaghara faịlụ? Nke a iOS data mgbake software na-ahapụ gị na-eme ya n'ihi na free. Gbalịa ya na ị ga-ama ya.
Gụọ gị iTunes ndabere File maka Free
Anyị niile maara na Apple adịghị ekwe ka ndị mmadụ na-agụ ọdịnaya nke iTunes ndabere faịlụ, mgbe a iOS data mgbake software na-eme, na ọ bụ maka free.
1 Pịa Preview & Bipute Your Data
Ọ bụ ihe karịrị ihe iOS data mgbake ngwá ọrụ. Mgbe ị na-ahụ gị data na Doppler N'ihi ya, ị nwere ike na-ịhụchalụ na ibipụta ọdịnaya mgbe ị nwere ndị dị otú a mkpa. Ọ bụ a onye-click ọrụ.
Naghachi Up 18 File Types
Nke a iOS data mgbake software-enyere gị aka inwetaghachi data dị ka ozi kọntaktsị, foto, ndetu, na-akpọ akụkọ ihe mere eme, ihe ncheta, WhatsApp ozi, na ndị ọzọ, ruo 18 faịlụ na ụdị.
Bibiri naghachi ihe ị chọrọ
Mgbe ịgụ isiokwu gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka, ma ọ bụ adịrị iTunes ma ọ bụ iCloud ndabere faịlụ, ị nwere ike ịhụchalụ na họrọ ihe ọ bụla ị chọrọ iji naghachi ha na kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ gị. Ọ bụ kpam kpam gị.
Nke a iOS data mgbake software bụ a kpam kpam na-agụ-na-software. Ọ gaghị anọgide na, gbanwee ma ọ bụ ihihi ọ bụla data na ngwaọrụ gị ma ọ bụ na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ. Anyị na-gị onwe onye data na akaụntụ kpọrọ ihe. Ị na-na na mgbe niile bụ naanị onye nwere ike ịnweta ya.
Complete iOS Ndakọrịta
All ụdị nke iPad Pro, iPad Air, iPad mini, na iPad
App si photos
App si video
App si akwụkwọ
3 Data Recovery Ụzọ
Kpọmkwem iṅomi ekwentị gị na-agbake ehichapụ data
Wepụ gị iTunes nkwado ndabere na mpaghara naghachi faịlụ ndị ahọrọ
Wepụ gị iCloud nkwado ndabere na mpaghara naghachi faịlụ ndị ahọrọ
Kensinammuo, nchebe, na a pụrụ ịdabere.
Gbalịa ya free ụbọchị 30!
Naghachi niile data, ma ọ bụ họrọ faịlụ
Ị nwere ike ịnweta akaụntụ gị
3 dị mfe nzọụkwụ: jikọọ, ike iṅomi ma napụta
Deerenụ A Review
All ehichapụ photos na-hụrụ. Were banyere 30 nkeji. Ihe omume echichi anaghị oge. Ọ bụrụ na ị maara English, mgbe ahụ ihe niile na-aga ọtụtụ ihe ngwa ngwa. M ga-eji usoro ihe omume na ikpe nke mberede. Olileanya maka ihe ịga nke ọma mgbake nke dị mkpa ka m photos.
Daalụ maka enyemaka. Ị nyere m na-agbake m ehichapụ photos. Nke a na usoro bụ magburu onwe. M ndụmọdụ ka onye obula eji nke a usoro ma ọ bụrụ na ị na ihichapụ dị mkpa ọmụma
Good mmemme. Enyere ndị mmadụ aka-agbake ehichapụ faịlụ. N'ihi creators. M nwere ike ikwu iji a ọtụtụ ndị na-n'ezie mkpa iji weghachi ngwa. Atụla egwu iji wụnye ihe omume a. N'ihi na ọ ga-enyere gị aka-agbake gị ehichapụ comments
3 Ụzọ naghachi ehichapụ Text Ozi na iPhone
Olee otú Dịghachi Data si ama esịn Broken iPhone
Olee otú Dịghachi Call History na iPhone (iPhone 7 Plus / 7 So)
Olee otú Dịghachi ehichapụ foto site na iPhone (iPhone 7 Plus / 7 So)
Olee otú Dịghachi iPhone Data Lost mgbe Iweghachi na Factory Settings
Olee otú Dịghachi ehichapụ Video on iPhone 7 (Plus) / 6s (Plus) / 6 (Plus) / 5s / 5C / 5 / 4S / 4
Olee otú iji weghachite WhatsApp Ozi na iPhone 7 / 6s / 6 / 5s / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS
Olee otú Dịghachi ehichapụ iPhone Ndi ana-akpo enweghị ndabere
Olee otú Dịghachi iMessages si iPhone (iPhone 7 Plus / 7 So)
Nyefee iOS WhatsApp na iPhone / iPad / iPod aka / gam akporo ngwaọrụ, ma ọ bụ nkwado ndabere na mpaghara / mbupụ ya kọmputa.